အလေးချိန်တိုးရန်နည်းလမ်းများ | အလေးချိန်ဘယ်လိုတင်ရမလဲ
အပေါ်တင်ခဲ့သည် မေလ 21, 2017
သင်အဝလွန်နေလျှင်, သင့်ကိုယ်အလေးချိန်တက်သင့်ကြောင်းသင့်ဆရာဝန်ကပြောကောင်းပြောလိမ့်မည်. သင်ကအားကစားသမားတစ်ယောက်ဆိုရင်, သင်သည်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်အရေအတွက်များအတွက်အလေးချိန်ချင်ပေလိမ့်မည် – ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကပြိုင်ပွဲတွေအတွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့အလေးချိန်အတန်းအစားတစ်ခုတက်ချင်လို့ပဲ, သို့မဟုတ်သင်ကြွက်သားရချင်သောကြောင့်, ပြီးတော့အပိုကြွက်သားတွေ ၀ တ်လာတာကြောင့်သင်ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိပါတယ် (ပြန်လာပြီ – ပိုမိုအားကောင်းလာသောအခါအဆီဆုံးရှုံးခြင်း – လုပ်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်၊ မသင့်တော်သောလူများအတွက်သိသာသောခွန်အားကိုရရှိစေနိုင်သည်).
ဒီတော့, ကိုယ်အလေးချိန်တက်ဖို့လုံခြုံပြီးထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကဘာလဲ? ကောင်းပြီ, ကိုယ်အလေးချိန်တိုးရန်နည်းလမ်းအားလုံးသည်တူညီသောမူကိုလိုက်နာသည် – သင်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့သင်အသုံးပြုသည်ထက်ပိုသောကယ်လိုရီကိုစားပါ, ပြီးတော့ရလဒ်အနေနဲ့သင်အလေးချိန်တိုးလာလိမ့်မယ်.
မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်, နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမည်မျှကယ်လိုရီမည်မျှစားသင့်သနည်း, အဲဒီကယ်လိုရီ၏ပုံစံအတွက်အဘယ်အရာဖြစ်သင့်?
သငျသညျမှာရှိတဲ့ Junk အစားအစာကိုစားလိုလျှင်, သငျသညျအလေးခြိနျရရှိပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အများကြီးအဆီဖွစျလိမျ့မညျ. သငျသညျပရိုတိန်းနဲ့ကျန်းကျန်းမာမာဆီကြွယ်ဝသောအစားအစာကိုစားလိုလျှင်, နှင့်ကြီးမားသောကယ်လိုရီပိုလျှံများ, ထို့နောက်သင်ဆဲအဆီတွေအများကြီးရရှိပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်နှင့်အတူအချို့သောကြွက်သား. မိုးသည်းထန်စွာလေးရုတ်သိမ်းရေးနေချိန်မှာသင်တူညီတဲ့အစားအသောက်ကိုလိုက်နာပါလျှင်, ပြီးနောက်သင်ပိုမိုအားကောင်းလာကြွက်သားရရှိပါလိမ့်မယ် – အဖြစ်အဆီ.
သငျသညျတခုကယ်လိုရီပိုလျှံကိုစားလိုလျှင် 500+ သင်၏စုစုပေါင်းနေ့စဉ်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်နေ့လျှင်ကယ်လိုရီ, ထို့နောက်သငျသညျအဆီရဖို့ပါလိမ့်မယ်, သငျသညျတစ်ချိန်တည်းမှာမိုးသည်းထန်စွာလေးရုတ်သိမ်းရေးနေကြသည်လျှင်ပင်. ဆီဥကိုအမြတ်ဖြစ်ပါသည်, ဝမ်းနည်းစွာ, မလွှဲမရှောင်. စားပါကအစာစားခြင်းကယ်လိုရီပိုနည်းသောအစာကိုစားခြင်းသည်သင့်အားကြွက်သားများများနှင့်အဆီနည်းစေနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်အမြဲအချို့သောအဆီအမြတ်ရှိလိမ့်မည်.
တချို့လူတွေကရိုးရိုးကြီးမားသောစားချင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, သူတို့ကယ့်ကိုအလေးချိန်ရဖို့ရန်လုံလောက်သောကယ်လိုရီစားရန်ရုန်းကန်ကွောငျးတှေ့ – သင်မူကား, ပရိုတိန်းလှုပ်ခြင်းနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရရှိ အသုံးပြု. ဒီပတ်ပတ်လည်ရနိုင်, ပင်အပိုကယ်လိုရီရဖို့ဖျော်ရည်သောက်သုံးခြင်းဖြင့်.
တကယ်ပါပဲ, အားကစားနည်းပြမာ့ခ်ရစ်ပ်တိုoeကအင်အားကောင်းသောလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်နေစဉ်အတွေ့အကြုံရှိသူရှိသင့်သည်ဟုယုံကြည်သည်။. ဤသည်ကိုသင်အလွန်ရှည်လျားသောကာလများအတွက်ရေရှည်တည်တံ့နိုင်တစ်ခုခုမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အလေးအနက်ကြွက်သားထုကိုရဖို့ရှာဖွေနေသူလူငယ်တစ် ဦး သည်, ဒါကြောင့်တစ် ဦး option ကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
ဘာကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်တက်ဖို့ကြိုးစားနေရတာလဲဆိုတာတကယ်ကိုမူတည်ပါတယ်, သင့်ရဲ့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အလေးချိန်, မင်းအသက်, မင်းရဲ့ကျား၊, နှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး၏သင့်လက်ရှိအဆင့်ကို.
သင်တစ်ဦးစားရောဂါကနေနာလန်ထူနေတယ်ဆိုရင်, ဥပမာ, ထို့နောက်သင့်လမ်းကြောင်းကိုပဲကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းအနည်းငယ်အလေးချိန်ရဖို့ရန်ရှာနေသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုမှကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်မယ့်. သင်သည်မည်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိသည်သို့မဟုတ်ဘာလုပ်ရမှန်းသေချာမသိကြပါလျှင်, ထို့နောက်သင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့မတိုင်မီပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ဆရာဝန်စကားပြော.